Jwell denda rekudzivirira kugadzirwa kwepamberi panguva iyi Meltblown isiri-yakarukwa extruder iri kushomeka - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Jwell denda rekudzivirira kugadzirwa kwepamberi panguva iyi Meltblown isiri-yakarukwa extruder iri kushomeka
Nguva: 2020-02-21 Hits:
Maawa makumi maviri nemaviri online Technical support
VaWang vakati kuitira kudzikisira kushomeka kwezvirwere zvekudzivirira nekukurumidza sezvazvinogona, vatengi vazhinji veJwell Machinery muirabhabha nepurasitiki indasitiri vakasiya zororo reCYY vakashanda nguva yekuwedzera kuti denda rekudzivirira zvinhu risvike kumberi kwe denda rekudzivirira nekukurumidza.
Jwell Machinery, semupi wekupa michina, zvakare anoshanda pamwe chete nekugadzira pamwe nekuwanisa zvinhu zvinorwisa denda. "Muna Ndira 2020, patakadzidza kuti vatengi vazhinji vaishanda nguva yekuwedzeredza mhando dzakasiyana dzezvinhu zvitsva zvepurasitiki zvekuvakisa (mvura isingaiti, mapaipi einjiniya emunharaunda, musangano wakasanganiswa wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza) kuitira kuvaka chipatara cheLeishenshan neHuoshenshan, takabva tangofunga kurega iyo CNY. Munguva yezororo, famba nekukurumidza, unganidza varwi vepamusoro, mainjiniya ekugadzirisa michina, uye upe ku-saiti kubatanidza nevatengi kuburikidza nerekupedzisira gwara rekupedzisira kuti upe kugadzikana kutanga-up kugadzirwa kwevashandisi vekambani uye nekupa 24-awa tekinoroji mabasa ekutsigira. Akadaro Wang.
Jwell Machina Kwose Kugadziriswa kweSmart Fekitori
Dzokera kubasa pamberi
Nekukurumidza kukura kwehosha iyi, zvekushandisa zvinorwisa denda zvinhu zvakaita semasikisi, zvipfeko zvekudzivirira, uye machira asina kurukwa ekugadzirwa kwemasikisi ave akakurumidza. Kuitira kuona kuti kugadzirwa kwemasikisi mbishi zvinhu uye zvipfeko zvekudzivirira mbichana, Jwell akakurumidza kuronga vashandi pasi pekutarisirwa kwemapato ese, uye achifunga nezvekuita denda rake rekudzivirira uye kutonga, akawana mvumo yekutangazve basa munaKukadzi 4. ..
Jwell Machinery anoshingaira anopa nyanzvi extrusion michina uye zvishandiso rutsigiro rwekuchengetedza indasitiri: PP isiri-yakarukwa extruder / PP meltblown isiri-yakarukwa extruder / TPU / EVA / TPE firimu extrusion mutsetse.
VaWang vakaudza vatori venhau kuti pari zvino, kudiwa kwemusika wezvinhu zvehutsanana uye zvinorwisa denda zvinopisa zvikuru, uye zvigadzirwa zvinozivikanwa zvinoverengeka zviri kushomeka. Mushure mekunge kambani yatangazve basa, kune mamwe maodha uye inozivikanwa kwazvo mumusika.
PP Isina-yakarukwa / PP Meltblown isiri-yakarukwa jira extrusion michina
Jwell ane ruzivo rwakakura muindasitiri yezvinhu zvekurapa. Pakati pavo, polypropylene meltblown nonwovens, ayo akakosha zvinhu zvekudzivirira uye kudzora, shandisa yakakosha polypropylene mbishi zvigadzirwa uye wedzera kuronda zvekurapa giredhi zvinowedzerwa, Zvekurapa zvigadzirwa zvakagadzirwa zvakasarudzika zvigadzirwa zvakagadzirwa naJwell yakafanana mapatya sikuru extrusion maitiro uchishandisa yakasarudzika maitiro tekinoroji. Ichi chakakosha zvinhu zvine hunhu hweyakagadzikana fluidity, yakamanikana mamorekuru kugoverwa kwekurema, uye kugona kwakanyanya kwekutenderera. Iyo inoshandiswa kuburitsa meltblown isiri-yakarukwa zvinhu uye inogona kushandiswa zvakanyanya mukudzivirira kwekurapa, zvinhu zvehutsanana, firita zvinhu uye mimwe minda.
Iyi mhinduro inopa yakakwana seti yemhinduro kune vazhinji vane hunyanzvi vagadziri muChina nekune dzimwe nyika. Jwell arikugadzira cheni yekutengesa uye ari kugadzirira kupa mitsara yekugadzira yakawanda kumabhizinesi ane chekuita epamba kuti ape zvakawanda kudziviriro yedenda.
TPU / EVA / TPE firimu extrusion mutsetse
TPU firimu yakavakirwa pane TPU pellets uye inogadzirwa kuita firimu kuburikidza nekukanda maitiro. Jwell anotora pane yekugadzira ruzivo rwevakawanda polyurethane TPU vagadziri. Kubudikidza nekugadzirisa uye hunyanzvi, inoshandisa imwe kana kupfuura imwechete-sikuru extruders yekubatanidza. Yese extruder yakakamurwa kuita 8 tembiricha yekudzora matunhu eiyo chaiyo yekudzora tembiricha uye yakakwira kuburitsa Inogona kusvika 600KG / H, uye inogona kushandiswa mune imwechete-rukoko, A / B / A kana A / B nzira yekuparadzira. TPU firimu ine yakanakisa hunhu senge kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, isina-chepfu, anti-chakuvhe, anti-bhakitiriya, inopfeka-inopokana uye inorwisa-ngura, uye bio-inoenderana. Inoshandiswa zvakanyanya mune zvekurapa kupatsanura zvipfeko, ngowani dzekudzivirira uye zvimwe zvekurapa kupatsanura zvigadzirwa zvehutano uye denda rekudzivirira zvinhu uye shangu, zvipfeko, inflatable matoyi, zvemidziyo yemitambo, zvekushandisa zvekurapa, zvekusimbisa muviri, nezvimwe.
Zvichienderana nezvinodiwa nefekitori kudigitalization uye nehungwaru manejimendi, iyi nhevedzano yemamodeli inopa mabasa senge otomatiki kutonga, kutora data, kuchengetedza data, kuongororwa kwedata, kugadzirwa manejimendi, yepasi rese synchronous yekutarisa, nezvimwe, kuti uone iyo yakazara seti yekugadzira kwekuwedzera. mitsara kana extruder fekitori manejimendi uye Digitalization uye kuona kwemaitiro. Yakanyanya kudhura-inoshanda.
VaWang vakati parizvino, vazhinji vevashandi vari mumusangano wewekishopu nemuchina vakasvika. Nekuda kwekudzivirira uye kudzora kwekambani basa riripo, kunyangwe hosha yakadzora kutangazve kwekugadzirwa kwemazhinji, inogona kuvimbisa kugadzirwa nekushanda kwefekitori. Chekutanga batch michina mugore reMakonzo rakatakurwa ndokutumirwa kuGerman nhasi.
"Rudzi urwu rwekutenda rwave kubvumirana kweJwellist." Chero bedzi isu tichirwisa zvakaoma uye tichiteerera kuchengetedzeka uye kugona, iwo marongero ari muruoko anonyatso kuunzwa kana achimanikidzwa. "Jwell Kambani iri kurongedza mashandisirwo ezvekutengesa uye ichigadzirira kupa mitsara yekugadzira kumabhizinesi ane chekuita nekunze nekune dzimwe nyika kuti vabatsire mukudzivirira denda uye kudzivirira denda."
KUMASHUREKutsigira wepasi rose "Anti-denda", CHINA JWELL yakasimba yakatanga PP Yanyungudika-yakaridzwa Nonwoven machira ekugadzira mutsara
NEXTSHANGHAITEX 2019 TIKUGARAI KUJWELL